Dhageyso+Akhriso:Andalus oo Baahisay Wareysi laga qaaday Fuliyihii Weerarkii Hotel SYL.
Wednesday August 31, 2016 - 19:53:29 in Wararka by Super Admin
Warbaahinta ku hadasha Afka Xarakada Al Shabaab ayaa Baahisay wareysi laga qaaday dagaalyahankii fuliyay weerarkii Hoteel SYL iyo Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan heybta fuliyahii weerarkaasi.
Maalintii Talaadada oo taariikhdu ku beegneyd 27-kii bishan Dul-Qacdah, 1437, oo waafaqsaneyd 30-ka August, 2016-ka waxay Katiibada Istish-haadiyiinta beegsatay Hotel lagu magacaabo SYL oo ku dhow madaxtooyada Villa Somalia, kana mid ah xarumaha laga abaabulo weerarada ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed.
Ugu yaraan 40 Qof ayaa lagu dilay weerarka, halka 70 kalena lagu dhaawacay,dadka dhintay ayaa u badnaa ilaalada madaxtooyada iyo Saraakiisha sidroonka Dowladda Federaalka, iyadoo sidoo kalena ay waxyeello soo gaartay wasiirro iyo xildhibaano goobta ku sugnaa.
Jaabir waa Aabe 44 jir ah oo ka dhashay beesha Mareexaan ee degta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya,
Wuxuu ku dhashay deegaanka Buusaar ee Wilaayada Gedo sanadkii 1972-kii.
Intii uu taagnaa saaxada Jihaadka wuxuu dowr muuqda ku lahaa oo uu ka soo shaqeeyey maktabka Xisbada, maktabka Jeyshka, maktabka Dacwada, iyo maktabka Istish-haadiyiinta oo ah midkii ugu dambeeyey ee uu ka tirsanaa.
Halkan ka dhageyso Wareysiga laga qaaday Cabdullaahi Diiriye MP3
Weerar culus oo markale lagu qaaday saldhigga Baar Sanguuni.